Ogaden News Agency (ONA) – Daawo: Safiirka Gumaysiga ee Israa’iil U Joogay oo Sheegay Ineey EPRDF tahay Isbahaysi Fadhiid Ah oo Waa Hore Dhintay.
Daawo: Safiirka Gumaysiga ee Israa’iil U Joogay oo Sheegay Ineey EPRDF tahay Isbahaysi Fadhiid Ah oo Waa Hore Dhintay.
Posted by ONA Admin	/ November 27, 2015
Safiirka Gumaysiga Itoobiya u jooga dalka Israa’iil Helawe Yosef ayaa shaaca ka qaaday in isbahaysiga magac uyaalka ah ee EPRDF uu lamid yahay wax dhintay oo wakhtigiisii lasoo dhaafay.
Helawe Yosef ayaa khudbad uu kajeediyay munaasabad ay dad badani kasoo qaybgaleen ka sheegay ineeysan EPRDF waxba wadanka u qabanin mudadii ay talada hayeen oo gaadhaysa 24 sano. Isagoo aad u dhaliilaya wax qabadka isbahaysigan ayuu yidhi * Maxay dalka u qabteen, wax lataaban karo oo intii ay xukunka hayeen ay qabteen majiraa?*.
Malaayiin Itoobiyaan ah ayaa khatar ugu jira macaluul & abaaro kuhabsaday awgood. Shacabka intiisa badan ayaa noloshoodu waxay ku tiirsan tahay gargaarka banii’aadminimda oo ay ka helaan wadamada deeqda bixiya. Itoobiya ayaa kamid ah wadamada aduunka ugu saboolsan.
Saraakiisha EPRDF ayaa ku mashquulsanaa mudadii ay talada hayeen boobka, xasuuqa, baro-kicinta & musuqa ay ku hayaan hantida shacabka meeshay horumar & nidaam toolmoon bulshada u horseedi lahaayeen. Qaar kamid ah kooxdan ayaa hantidii ay musuqeen maalgashaday meelo kamid ah Yurub, Asia & Maraykanka.
Hadalka kasoo yeeshay Helawe Yosef ayaa loo cadayn ugu filan heerka ay manta marayso xaalada EPRDF. Khubarada arimaha Itoobiya qaadaa dhiga ayaa sheegaya in lagaadhay kala yaacii Itoobiya taasoo aad looga cabsi qabo in dagaalo sokeeye ay wadanka ka dhacaan.
Hoos ka daawo khudbadii Mr. Helawe Yosef.